DAAWO: Ibrahimovic muxuu ka faa’iideeyay fiidiyoowyadii Van Pasten? Capello ayaa ka sheekaynaya! – Gool FM
DAAWO: Ibrahimovic muxuu ka faa’iideeyay fiidiyoowyadii Van Pasten? Capello ayaa ka sheekaynaya!
(Roma) 11 Okt 2016 – Macallinkii hore ee Juventus iyo England oo ahaa ninka Zlatan keenay Torino iyo Talyaaniga ayaa ka sheekeeyay sida uu wax wayn uga qabtay xeeladaha dhamaystir ee laacibkan kaddib markii Zlatan Ibrahimovic u shidey cajalado muujinaya goolashii uu dhalin jirey Marco van Basten.
Labada nin ayaa Juventus isla joogey fasalladii 2004-5 iyo 2005-6 oo ay laba horyaal oo is xigta qaadeen, waloow labadaba laga xayuubiyay fadeexaddii Calciopolli darteed, wuxuu laacibka reer Swede ka mid noqday weerarrada ugu halisan caalamka kubadda.
“Ibrahimovic wuxuu lahaa farsamooyin aan caadi ahayn, markii aan Juve tegey waxaan naadiga waydiistey inay soo iibiyaan, waayo waxaan rabey fasalkii ka horreeyay ee aan Roma joogey oo waan dalbaday balse waxaan haysanney Totti, Cassano, Batistuta, Montella iyo Delvecchio”, ayuu Capello u sheegay Premium Sport.
“Bilowgii waayihiisii Juventus, waxaan ogaadey inuu ka jilicsan yahay sidii aan moodayay oo uu weliba ku liito kubadaha kore. Ibrahimovic wuxuu jeclaa inuu kubadaha dhigo in ka badan inta uu dhaliyo. Waxaanse doonayay inuu naxariis la’aan noqdo marka uu goolka hor taagan yahay.”
“Wuxuu u farsamo ekaa Van Basten waxaana u shiday muuqaalladiisii si uu u wanaajiyo dhamaystirkiisa, waxaan u sheegay inuu daawado dhaqdhaqaaqyada Van Basten si uu u derso qaabkii uu goolasha u dhalin jirey. Ibra markiiba wuu fahmey waxaana muujinaya natiijooyinka.” ayuu raaciyay.
Ibra oo haatan 35 jir ah ayaa haatan u safta kooxda Manchester United, isagoo aan weli ka dhicin safka hore waloow uusan weli si wanaagsan ula qabsanin kooxdaasi.
Daafaca Arsenal Mustafi oo markale ka hadlay Muslimnimadiisa iyo wax-tarka wayn ay Diintiisa Islaamka u leedahay ciyaarihiisa
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Brazil vs Argentia 3-0, Uruguay vs Ecuador 2-1, Colombia vs Chile 0-0